Ku saabsan Abu Dhabi | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Ku saabsan Abu Dhabi
Abu Dhabi waa magaalada caasimada ah ee Isutagga Imaaraatka Carabta waxayna fadhiisataa 80% dhulka isku-darka ah ee toddobada Imaaraad ee Imaaraatka. Abu Dhabi wuxuu daboolayaa qiyaastii 67, 340km2, kaas oo ka kooban inta badan lamadegaanka, oo ay ku jiraan qayb ka mid ah Quarter Empty (Rub Al Khali) iyo guluubyada cusbada / sabkha. Xeebta Adu Dhabi wey balaaran tahay 400km.
dhaqamada kala duwan iyo bulshada kala jaadjaadka ah
Dhaqaalaha ugu dhaqsaha badan
Abu Dhabi waxa uu soo maray isbadallo balaaran sanado badan. Isbeddelada ayaa ku dhacay cabirro aad u weyn, iyagoo keenaya koboc dhaqaale oo aan horay loo arag iyo horumarin taas oo ay u aragtay Emirate-ka inuu si aad ah u korayo oo uu hadda yahay magaalo aad u ballaaran. Waxaas oo dhan waxaa suurtogal ah maxaa yeelay hoggaamiyeyaasha Abu Dhabi waxay arkeen himilooyin isla markaana u horseedeen horumarka ku saleysan saliida iyo gaaska badan ee keydka ah ee Emirate-ku haysto.
Maamulka, imaaraadku wuxuu u qaybsamaa saddex gobol. Tan koowaad waxay ka kooban tahay magaalada Abu Dhabi, oo ah caasimadnimada amiirka iyo kursiga dowladda ee dowladda. Magaalada jasiiradda Abu Dhabi waxay qiyaastii 250 mitir u jirtaa dhul weynaha waxayna leedahay meelo kaloo badan oo hareeraheeda ah. Magaalada waxay kuxiran tahay dhulka ugu waaweyn ee loo yaqaan Maqta, Mussafah, iyo buundooyinka waaweyn ee Sheikh Zayed halka kuwo kale la dhisayo.
Taariikh kooban oo ku saabsan Abu Dhabi
Qeybo ka mid ah Abu Dhabi dib ayey u degeen qarnigii 3-aad ee BC, taariikhdeedi horena waxay raacday qaab-nololeedka reer guuraaga, daaqa, iyo kalluumeysiga gobolka. 'Dhabi,' oo sidoo kale loo yaqaan Carabtu Gazelle ayaa ah halka asal ahaan magac ahaan loo siiyay magaalada caasimada ah ee Abu Dhabi (oo micnaheedu yahay Aabaha Gazelle) ugaadhsadeyaashii hore ee qabiilka Bani Yasiin oo iyagu markii hore ogaadey jasiiradda sidii ay ahaan jireen. waxay raadinayeen faasas oo waxay heleen il biyo nadiif ah.
Qarniyo badan xoola dhaqashada geela, beeraha, kalluumeysiga, iyo quusitaanka luul waxay ahaayeen shaqooyinka ugu waaweyn ee dhaxal sugaha, ilaa bartamihii qarnigii 20aad, qiyaastii 1958 markii saliida la helay iyo horumarka Abu Dhabi casriga.
Abu Dhabi wuxuu markii hore ahaa beel yar, isir ahaan isku dhaqan ah, laakiin maanta waa bulsho dhaqammo kaladuwan iyo kala jaad jaad ah iyadoo ay yimaadeen qawmiyado kale iyo wadamo kale oo ka kala yimid adduunka oo dhan. Horumarkan gaarka ah ee ka dhacay Khaliijka Faaris wuxuu ka dhigan yahay in Abu Dhabi guud ahaan u dulqaad badan yahay marka loo eego deriskiisa, oo ay ku jirto Sacuudiga.
Emiratis waxaa lagu yaqaanay dulqaadkooda. Waxaad ka heli kartaa kaniisadaha Masiixiyiinta ah dhinac dhinac ah oo leh dhismayaasha Hindu iyo Sikh gurdwaras. Jawiga qalcadda ayaa si isdaba joog ah u koraya maantana waxa jira iskuulo Aasiya iyo Galbeedka iyo xarumo dhaqameed.
Abu Dhabi wuxuu leeyahay inta badan hodanka Imaaraadka ee dhaqaalaha hodanka ku ah. Waxay leedahay 95% saliid ah iyo 92% gaas. Xaqiiqdii, ilaa 9% oo ka mid ah keydka saliida adduunka ee la xaqiijiyay iyo in kabadan 5% gaaska dabiiciga ah ee dunida. Marka laga hadlayo wax soosaarka guud ee gudaha (GDP) iyo dakhliga qofkiiba, Imaaradda Abu Dhabi waa Imaaradka ugu qanisan Imaaraadka. In kabadan $ 1 tiriliyan ayaa lagu maal galiyay magaalada.
Sida mid ka mid ah dhaqaalaha ugu dhaqsaha badan adduunka, Abu Dhabi wuxuu noqday meel kulul oo loogu talagalay warshadaha hal-abuurka leh. Sababta oo ah halka ay ku taal bartamaha Aasiya iyo Yurub, waa mid la geli karo oo ku xirma dhammaan magaalooyinka waaweyn ee adduunka, taas oo ka dhigaysa meel ku habboon ganacsiga.
Maaddaama ay tahay Caasimadda UAE, dawladdu waxay si xoogan u taageertaa ganacsiga maxalliga ah iyo warshadaha warbaahinta, maalgashi xoog leh ayey ku abuuraan hal-abuurnimada iyo joogtaynta jawi dhaqaale oo deggan oo dhiirrigeliya maalgashadayaasha. Abu Dhabi wuxuu laalaadayaa xarumo ganacsi oo cajaa'ib leh oo aad u qurux badan sida xarun-carwo-faneedyo casri ah, hoteello raaxo leh, tiyaatarro, garoonno, koorsooyin golf-yada ah iyo goor dhow, qaar ka mid ah matxafyada adduunka ugu caansan.
Waxa ka weyn suuqyada nolosha iyo suuqyada maxalliga ah ee loo yaqaan 'souqs' ee maxalliga ah ayaa sameeya khibrad ganacsi oo fiican. Cunnooyinka cajiibka ah ee maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba waxaa loogu adeegaa maqaayadaha heer-caalami ah ee waddanka oo dhan. Ku biirista iyo ku wadista baaskiilka magaalada qurux badan ama xeebta liidata waa soo dhaweyn wanaagsan oo loogu talagalay miyirka jirdhiska.
Sheikh Zayed Masaajidka
Masjidka weyn ee Sheekh Zayed waa mid ka mid masaajidda ugu waaweyn adduunka. Dhismaha casriga ah ee quruxda badan ee Islaamka waxaa dhisay Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan oo lagu xasuusto aabihiis. Masaajidka ayaa sharaf weyn u leh lahaanshaha rooga ugu weyn adduunka oo ay dhammaysteen 1200 farshaxanno muddo 2 sano ah.
Waxay ku taal Jasiiradda Saadiyat ee ku taal magaalada Abu Dhabi, Louvre waa matxafkii ugu horreeyay ee farshaxanka iyo ilbaxnimada noocan oo kale ah ee ku yaal Imaaraadka Carabta. Waa soo jiidasho habboon oo ku habboon meel si xoog leh u adkeeyay ilaalinta iyo qadarinta dhaqanka.
Ferrari World waa barta Ferrari ee ugu horreysay 'looyag' meel kasta oo adduunka ah. Waxay siisaa dadka soo booqda waayo-aragnimada adrenaline-bamgareynta iyada oo leh fikradeeda u gaarka ah ee raacideeda Ka sokow safarada xiisaha leh ee Ferrari, waxaa jira bandhigyo toos ah, kart-koronto, iyo xaalad farshaxanimada farshaxanka.
Digniinta Bros. World
Meel aan sidaa uga fogeyn Ferrari World on Jas Island waa Warner Bros. World Abu Dhabi, waa 1 bilyan oo doolar oo ah garoon lagu raaxeysto oo hawo buuxda leh waxayna ka kooban tahay 29 doomood, makhaayado 7-xiddigle ah, dukaanno iyo bandhigyo xiiso badan, oo ay ka mid yihiin jilayaasha caanka ah ee Warner Bros. Mawduucdu wuxuu u qaybsan yahay 6 qaybood oo muhiim ah oo muhiim ah kuwaas oo kala ah Gotham City iyo Metropolis (tusaalahan shaxanka ah ee sheekooyinka DC sida Batman iyo Spiderman), Cartoon Junction iyo Dynamite Gulch (maktabadaha kartoonada oo buuxa oo ka kooban tunoneylada iyo Hanna Barbera), Bedrock (duluc ku saleysan mawduuc dusha Flintstones), iyo Warner Bros. Plaza oo soo bandhigaya Hollywoodka maalmihii hore.
Maalin kasta oo la bixiyo, qoraxda iyo cirka cad ayaa laga filan karaa Abu Dhabi. Si kastaba ha noqotee, magaaladu waxay ku aragtaa cimilo kulul oo qoyan laga bilaabo Abriil ilaa Sebtembar marka celceliska heerkulka ugu sarreynkiisu yahay 40 ° C (104 ° F). Sidoo kale, waa xilliga ay ku dhufato duufaano aan la saadaalin karin oo magaalada gudaheeda ku dhaca, aragtidiina hoos ugu dhacay dhowr mitir.
Ku dhawaad ​​dhammaan dhismayaasha magaalada waxay leeyihiin nidaam hawo qaboojiye. Muddada u dhaxaysa Oktoobar iyo Maarso waa wax yar marka la barbardhigo. Maalmaha qaarkood, boodhyo cufan ayaa la arki karaa. Bilaha ugu qaboobaa sanadka waa Janaayo iyo Febaraayo.